Caruur u dhimatay sun lamariyey jirkood si ay caafimaad ugu helaan xanuun jirka kahaayey – STAR FM SOMALIA
Sida dadka deegaanka ay xaqiijiyeen afar caruur ah ayaa waxa ay u geeriyootay Sun jirkooda la mariyay, kadib markii Waalidiinta dhalay caruurtaan ay Suntaasi jirkooda mariyeen.
Wararka waxa ay sheegayaan caruurtaan muddooyinkii u dambeeyay jirkooda uu ka soo baxay nabaro waaweyn oo cun cun ku keenay jirka, waxaana taasi ay dhalisay waalidiinta caruurta dhalay inay soo iibiyaan sun ay u arkaan inay xal u tahay nabarada ka soo baxay caruurtooda.
Waalidiinta dhalay caruurtaan ayaa saaka aad u argagaxay markii ay arkeen in caruurtooda ay geeriyoodeen, waxaana ay sheegeen in Sunta ay u mariyeen ay u arkayeen inay kaga caafimaadayaan nabarada jirkooda ka soo baxay.
Dadka Xaafada Carafaat ee Degmada Yaaqshiid ayaa dhacdadaan saaka aad u hadal haaya, waxaana caruurta lagu wadaa in goor dhaw aas loo sameeyo.
Caruurtaan ayaa ah afar caruur oo wada dhashay, hal gurina kuwada noolaa, balse amuurtaan ay qabsatay oo sidaasi ay ku geeriyoodeen.